Ụlọ ọrụ na -emepụta moto Downhole na ndị na -ebubata ya DeepFast
Nnyocha & Mmepe
Malite ịgba Bit
Bit pụrụ iche
Ngwaọrụ igwu mmiri ndị ọzọ
Ọkwa abụọ na ọkwọ ụgbọ ala abụọ ...
Matrix Isi PDC Drill Bit
Matrix Isi PDC Core Bit
Anyị na -eme mmepe elastomer na nrụpụta na nkwado nke ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ na sayensị na Europe maka ngwọta dị elu. Ngwunye ọkọnọ nke ndị na -emepụta nchara nwere ezigbo aha mba na mba na -enye ohere DeepFast weta moto na -adịte aka nke ukwuu n'ahịa. Nhọrọ ejiri nlezianya họrọ akara ule ihe pụrụ iche maka moto DeepFast na -enye arụmọrụ achọrọ.
Anyị na -enye gị ọtụtụ ngwaahịa nwere nkọwa teknụzụ dị iche iche maka ngwa ọ bụla, gụnyere ihe achọrọ.
A na -enye moto anyị na nhazi dị iche iche maka mkpa ụfọdụ.
Rotors na stators
Anyị na -enye akụkụ rotor na stators ụwa niile n'ogologo na nha dị iche iche.
Mkpụrụ obi anyị, ngalaba ike dị n'ọtụtụ nhazi. Nke anyị dabara maka apịtị mmiri (WBM), apịtị mmanụ (OBM), agitators, na ngwa ndị ọzọ.
Sistemụ Ngwaọrụ ujo
SGDF Shock System Sistem nwere ike belata esemokwu ma melite ibufe ibu n'ụzọ dị egwu site na ịmịpụta oscillation dị nro, si otú a na -eme ka mma olulu mmiri dị na ngwa ndị dị mgbagwoju anya. SGDF Shock Tool Sistem na -abawanye arụmọrụ mkpọtụ nke sistemụ mkpọchi ọ bụla nke esemokwu bụ okwu.
Ihe etiti dị na nhazi na nhazi ọ bụla.
Ụkpụrụ anyị: "Anyị na-achọta azịza mgbe niile" ---
ọbụlagodi n'ọnọdụ ndị siri ike na ọnọdụ ịma aka
Akwa-torque Ịchọ Drilling Jobs
Ọrụ siri ike, nke na -esiri ike abụghị maka motọ anyị siri ike.
A na -ewu injin anyị n'ụzọ pụrụ iche maka igwu ala n'okpuru ọnọdụ dị oke egwu na mpaghara mgbawa ugwu, n'okpuru oke okpomọkụ, na mgbe achọrọ oke ọkụ.
Mbelata ego dị mkpa nye onye ọ bụla. Ọ bụ ya mere anyị ji enye ndị na-anya ụgbọ ala ogologo oge na ogologo ndụ nke ihe niile moto.
Ndekọ egwu anyị gosipụtara nke motọ na-arụ ọrụ nke ọma pụtara arụmọrụ dị elu yana ọnụ ala nke ịkụ ala maka gị.
Ịrụ Ọrụ Pụrụ Iche
Ụgbọ ala anyị na -agba ọtụtụ awa na -enweghị ndozi.
Atụmatụ na Teknụzụ
Ngwa nke DeepFast na-ejikọ ndị elastomers German nke ọgbara ọhụrụ, nhazi jiometrị na njikwa mma. DeepFast na -enye stator dị na NBR na HNBR elastomers dabere na ụdị apịtị. A na-eji nlezianya enyocha usoro ọ bụla nke nrụpụta stator na usoro ihe iji hụ na stator dị elu.
A na-eji roft DeepFast rụọ igwe nwere ọkwa dị elu ma ghaa ya nke ọma na akụrụngwa igwe ọkaibe. Iji dabaa ihe achọrọ nke ngwa ọrụ akọwapụtara nke ọma, a na -atụgharị rotor DeepFast n'ụzọ dị ogologo. A na-ahọrọ rotors ka ọ dabara na ngwa mkpọpu ala ọ bụla. DeepFast rotors na-eji chrome plated site na teknụzụ German. Maka apịtị nnu nwere ọdịnaya chloride dị elu, DeepFast nwere ike ịnye rotor nwere mkpuchi carbide.
1. nnukwu torque
Dịkarịa ala, 50% torque karịa ndị nkịtị downhole Motors.
2. Ogologo ndụ niile
Ọbụlagodi 100% arụ ọrụ ka mma ma e jiri ya tụnyere nke obere moto na-agbada ala n'ihi igwe igwe axis ise ma ọ bụ rotors na stators.
3.Ndị na -eguzogide oke okpomọkụ
Ruo 175 Celsius na ọnọdụ siri ike.
4.Rinye n'ọrụ na OBM
Dizel, mmanụ mmanụ, mmanụ na -acha ọcha. Adabara mgbasa.
Ogologo 175 mm
Ọdịdị ọma nke ọma 8 3/8 ”~ 9 7/8”
Ogologo ya bụ 9789 mm
Njikọ Njikọ Dị Elu NC 50 Igbe
Njikọ Njikọ Ala NC 50 PIN
Kasị elu Nguzogide okpomọkụ
Oke ọnụego ọnụego 1000 ~ 2500 L/M 265 ~ 660gpm
Ọsọ Rotary 42 ~ 104 RPM
Nrụgide Max Diff 6 MPa
Ọkpụkpụ Max Diff
Nrụgide siri ike na -arụ ọrụ 4.5 MPa
Torque na -arụ ọrụ
8 ~ 12T
Ike kacha 122.5Kw
Max Ibu Ibu
Ịkwụnye ihe achọrọ Dayameta <7mm
Ọdịnaya chloride <50000 PPM
Nwere ike ikwu Point Aniline Point ≥70 ℃
Ngalaba Nrụgide siri ike
Nke gara aga: Ngalaba Ike
Nhazi German Downhole Motor
A pụrụ ịdabere na Downhole Motor
Ngwaọrụ igwu mmiri abụọ na ogbo abụọ
Ekele diri May 1st La ...
site na nchịkwa na 21-04-30
Sichuan DeepFast Oil Drilling Oke ...
site na nchịkwa na 21-04-28
Copyright - 2019-2021: Ikike Niile Echekwabara.